EcoCash Inodzikisa Huwandu hweMari Inoshandiswa paZuva
Kambani yeEconet, kuburikidza nebandiko rayo reEcoCash, yakazivisa neChitatu kuti vose vanoshandisa homwe yekufambisa mari yeEcoCash iyi, vave kungobvumidzwa chete kushandisa mari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora emunyika pazuva kutanga nezuro wakare.
Kambani iyi yakaburitsa gwaro raizivisa vanoshandisa EcoCash kuti mari iyi inenge ichibviswa pane chose chinenge chabhadharwa kusanganisira kuendesa mari kumabhanga, kutumira mari kune vamwe kana chero kungave kutenga airtime chaiyo.
Mukuru anoona nezvekuburtiswa kwemashoko kuEconet, VaFungaii Mandiveyi, vakati ichokwadi kuti kambani yavo yakaburitsa mashoko aya, asi havana kukwanisa kutaura zvizhinji sezvo vakanga vari mumusangano.
Imwe nyanzvi mune zvehupfumi vachishanda vakazvimirira, VaMasimba Kuchera, vanoti havaoni danho iri riri pfungwa yeEcoCash, asi kuti zvinobva muhurongwa hwemashandisirwo emari hwakaparurwa svondo rapera nagavhuna webhanga guru renyika, Doctor John Mangudya, uhwo vanoti ndihwo hwakatara mari inofanirwa kufambiswa pachishandiswa EcoCash.
Asi VaKuchera vanoti danho rekudzikisa mari inobvumidzwa pazuva iri richatambudza vanhu, zvikuru varimi, avo vatotanga kutenga zvikwanisiro zvekugadzirira mwaka mutsva wekurima.